प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७७, बुधबार २१:०६
बाँके प्रहरीले २ नाल भरुवा बन्दुक सहित बाँकेको राप्तीसोनारीबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । मंगलबार राती १:४० बजे राप्तीसोनारी गाँउपालिका ४ खरघट्टीमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा बन्दुक सहित दुई जनालाई पक्राउ गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक सुवास खड्काका अनुसार गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र सिमा प्रहरी चौकी सुईया बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलिले ५० वर्षिय राम बली चौधरी र ६१ वर्षिय बिष्णु प्रसाद चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले उनिहरुको घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा २ नाल भरुवा बन्दुक फेला पारेको खड्काले बताए ।
लागू औषध मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ
यसैबिच बाँके प्रहरीले लागु औषध मुद्दामा अदालत ८ महिना १३ दिन कै सजाय तोकिएका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १४ का ४५ वर्षिय राम गोपाल गडरियालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बाँकेमा बुझाईएको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेले दोषि ठहर गरी कैद सजाय सुनाएको थियो ।
त्यसैगरी लेनदेन मुद्धाका फरार प्रतिवादीलाई समेत पक्राउ गरीएको प्रहरीले जनाएको छ । लेनदेन मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेबाट ३ महिना कैद तोकिए लगतै फरार भएका बाँकेकोे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १४ बस्ने हग्गु भन्ने मो. सलिम जसगढलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बुझार्ईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक सुवास खड्काले जानकारी दिए । उनलाई अदालतले ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।